निर्मलाका बा–आमा न्याय माग्न काठमाडौं : ‘प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
निर्मलाका बा–आमा न्याय माग्न काठमाडौं : ‘प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट’
भाद्र २८, २०७५ घनश्याम खड्का
काठमाडौँ — फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीको मुख्य कर्तव्य अपराधी उम्किन नदिन घटनाको दसी प्रमाण सुरक्षित राख्नु हो । तर, कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा प्रहरीको भूमिका ठीक उल्टो देखिएको छ ।
न्याय माग्न बुधबार राजधानी आइपुगेका निर्मलाका बावुआमा र कञ्चनपुरका महिला अधिकारकर्मीहरूका अनुसार निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट र उनी मातहतका प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमै प्रमाणहरू नष्ट गरेको देखिन्छ ।
के भएको थियो कञ्चनपुरमा ?
किशोरी निर्मला पन्तलाई उनकी साथी रोशनी बमले घटना हुनु एक साताअघिदेखि नै डान्स सिक्न जान कर गरिरहेकी थिइन् । ‘साउनमा स्कुल वर्षेबिदा भएदेखि ऊ दिनहुँ आउँथी र जतिखेर पनि निर्मलालाई डान्स सिक्न पठाउनु न आन्टी भनेर कर गरिरहन्थी,’ आमा दुर्गादेवी पन्त भन्छिन्, ‘मैले हुँदैन, डान्स सिक्ने हाम्रो अवस्था पनि होइन र इच्छा पनि छैन भनेर टारेँ । तर उसले जिद्दी गरेको गर्‍यै गरेपछि अर्काकी छोरीलाई सम्झाइरहनुभन्दा आफ्नै छोरी नजाओस् भनेर निर्मलालाई दुई–चार चड्कन लगाएकी थिएँ ।’
त्यसको दुई दिनपछि साउन ९ गते आमा नभएका बेलामा रोशनी निर्मलालाई भेट्न उनको घर पुगिन् । गुजाराका लागि निर्मलाका बा घरदेखि अलि पर कञ्चनपुरकै भासी भन्ने ठाउँमा ठेलामा पानीपुरी बेच्थे । निर्मलाकी आमा पनि घरमै चटपटे बेच्ने गर्थिन् । आफू नभएका बेलामा आएकी रोशनीले उधारोमा चटपटे खाएको र ‘भोलि घरमा पैसा लिन आउनू’ भनेको कुरो पछि मात्रै आफ्नी अर्की छोरीबाट दुर्गादेवीले थाहा पाइन् ।
साउन १० गते बिहान ९ बजे दुर्गादेवीले निर्मला र अरू दुई छोरीसँगै खाना खाइन् । अनि निर्मलालाई होमवर्क गर्दै पसलमा बस्नु भनेर सामान लिन बजारतिर हिँडिन् । ‘दिउँसो १ बजे फर्केर आउँदा कान्छी छोरी मात्रै थिई, जेठी छिमेकीकोमा गएकी रहिछ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले निर्मला खोइ भनेर सोधें, उसले रोशनीकोमा गाइड बुक र अम्बा लिन जान्छु भनेर हिँडी भनी । निर्मला ११ बजे गएकी रहिछ ।’
साँझ ६ बजेसम्म पनि छोरी नफर्किएपछि दुर्गादेवीको मनमा चिसो पस्यो । सधँै समयमै घर फर्किने छोरीलाई आज के भयो भन्दै उनी डेढ किलोमिटर पर पर्ने रोशनीको घर पुगिन् । कम्पाउन्डसहितको दुई तले घरमा आफ्नी दिदी बबिताका साथ बस्दै आएकी रोशनी बमलाई दुर्गादेवीले गेटबाटै बोलाइन् ।
‘मैले छोरी खोइ नानी भनेर सोद्धा उसले ऊ त दुई बजे नै हिँडिसकी भन्ने जवाफ दिई,’ उनी भन्छिन्, ‘घरमा त आएकी छैन भनेर मैले भन्न नपाउँदै बबिताले मलाई तथानाम गाली गरी । आफ्नी छोरीको आनीबानी ठीक राख्नु नि, कता पोइल गइसकी होला हामीलाई किन दोष लाउनु भन्दै सत्तोसराप गरी ।’ यसरी अचानक बबिता पड्किएपछि दुर्गादेवी अन्योलमा परिन् । भित्र पो छे कि निर्मला भनेर हेर्न खोज्दा बबिताले उनलाई गेटबाट पस्नै दिइनन् । त्यसपछि उनी घर फर्किन् । निर्मलाको अत्तोपत्तो थिएन । छिमेकी लक्ष्मण भट्टलाई उनले छोरी हराएको र बबितासँग भएको ठाकठुकबारे बताइन् । लक्ष्मणले मोटरसाइकलमा राखेर उनलाई बम दिदीबहिनीकै घरमा पुर्‍याए ।
‘बबिताले फेरि पनि जे पायो त्यही भनेर हामीलाई झपारी । मलाई त्यसै बेला घरभित्र पसेर हेर्न मन थियो । तर लक्ष्मण पनि अर्काको घरमा पस्दा भोलि मुद्दा हाल्ली भनेर डराए,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी घर फर्कियौं । बबिताले पोइल गई भनेकीले पक्कै पनि बेच्न पठाए होलान् भन्ने लागेर लक्ष्मणले नाकामा पर्ने गड्डा चौकीमा फोन गरेर घटनाको रिपोर्ट लेखाए ।’ त्यसपछि उनीहरूले वडा प्रहरी कार्यालय पनि उजुरी हाले । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि फोन गरेर छोरी हराएकाले खोजी पाऊँ भनी निवेदन गरे, जहाँ तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट बस्ने गर्थे ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषीलाई कारवाही माग गर्दै बुधबार महेन्द्रनगरमा कालो पहिरन लगाएर प्रदर्शनमा उत्रिएका महिला  ।
‘एघार बजे घरबाट हिँडेकी छोरीलाई यति राति आएर खोज्ने हो ?’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फोन उठाउने प्रहरीले दुर्गादेवीलाई उल्टै झपार्‍यो, ‘अलि अगाडि नै आएको भए हुन्थ्यो, अहिले त रात परिसक्यो । अब भोलि निवेदन लिएर आउनुस् ।’
दुर्गादेवीको छटपटी झनै बढ्यो । ‘खोज्न सघाउला भनेको प्रहरीले त उल्टै सातो जाने गरी हप्काएको देख्दा मलाई कहाँ जाउँ र के गरौं भयो,’ काठमाडौंमा मानव अधिकारवादी र सञ्चारकर्मीसामु उनले घटनाबारे सबिस्तार भनिन्, ‘नजिकै भासी प्रहरी बिट थियो । त्यहाँ गएर गुहार लगाउँदा पनि प्रहरीले सुने नसुन्यै गरे ।’
त्यतिन्जेल रातको बाह्र बजिसकेको थियो । निर्मलालाई पक्कै केही भइसक्यो भन्ने दुर्गादेवीलाई मात्रै होइन, टोलछिमेकका सबैलाई पर्‍यो । छिमेकका सात/आठ जनाको टोली लिएर उनी फेरि बम दिदीबहिनीको घरमा पुगिन् । त्यो घर भएको वडा नम्बर १८ मा पर्ने सालघारी अस्थायी प्रहरी बिटका प्रहरीलाई उनीहरूले फोन गरे र गाउँलेको रोहबरमा घरभित्र पस्न प्रहरीलाई निवेदन गरे । तर प्रहरीले उही जिल्ला कार्यालयबाटै आएजस्तो जवाफ फर्कायो र भन्यो, ‘यति राति अर्काको घरमा पस्न मिल्दैन ।’ केही उपाय नलागेपछि दुर्गादेवी छिमेकीहरूसहित घर फिरिन् । भोलिपल्ट बिहानै फोटोसहितको निवेदन लिएर उजुरी गर्न गर्न जाँदा त्यो बिटका इञ्चार्जलाई एसपी विष्टले सरुवा गरिसकेका थिए ।
‘घटनाबारे थाहा पाउने जिल्लाका अरू पनि धेरै प्रहरीलाई साउन ११ गते नै सरुवा गरियो,’ निर्मलाका बाआमासँग काठमाडौं आउनेमध्येकी एक अधिकारकर्मी शारदा चन्द भन्छिन्, ‘प्रहरीले त्यसपछि सिलसिलाबद्ध रूपमा एकपछि अर्काे प्रमाण मेट्दै गयो ।’ उजुरी दिएर फर्किँदा दुर्गादेवी र उनीसँगै प्रहरी चौकी पुगेका गाउँलेले बम दिदीबहिनीको घरको कौसीमा सादा पोसाकमा केही प्रहरी उभिरहेको देखे । ‘हामीलाई जान मिल्दैन भनेका प्रहरी कसरी त्यहाँ एकाएक देखा परे ?’ दुर्गादेवी भन्छिन्, ‘त्यहीबेला मलाई प्रहरीप्रति शंका भयो ।’
तर प्रहरीले उनलाई र गाउँलेलाई भित्र छिर्न दिएनन् । बबिताले फेरि पनि दुर्गादेवीलाई गालीगलौज गर्दै ‘बारबार किन आइरहेको’ भनेर सबका अघिल्तिर हकारिन् । दुर्गादेवीले सँगै उभिएका प्रहरीलाई हात जोर्दै भनिन्, ‘साहेबहरू, हिजो पनि यसले यसरी नै मलाई झम्टेर घरभित्र पस्न दिइनन् । अहिले पनि त्यसै गरी । तपाईंहरूले मलाई देखाइदिन पर्‍यो, भित्र के भएको छ भनेर ।’
जबाफमा प्रहरीले उल्टै उनलाई सम्झाए, ‘तपाईं चुप लाग्नुस्, बुझ्ने काम हाम्रो हो । हामीले हेरिसक्यौं, भित्र केही पनि छैन ।’
बबिताले कठोर बचन लगाए पनि रोशनीले भने दुर्गादेवीलाई मुख फर्काएकी थिइनन् । उसबाट पो केही सुराक मिल्छ कि भनेर उनले रोशनीलाई सोधिन्, ‘तँ पनि त निर्मलाजस्तै मेरी छोरी होस् नि, भन् रोशनी ऊ कहाँ गई ?’
थाहा छैन भन्दाभन्दै रोशनीले कुरैकुरामा सुनाइन्, ‘खै अन्टी भासी जान्छु भन्थी ।’
भासीमा उनका बुवा यज्ञराज पन्त ठेलामा पानीपुरी बेच्ने गर्थे । निर्मला पनि हप्ता दुई हप्तामा बुवालाई भेट्न जान्थिन् ।
‘रोशनीले त्यसो भनेपछि मेरो मनमा झनै चिसो पस्यो । किनभने ९ गते नै छोरी भासी गएकी थिई । बुवा गुरुपूर्णिमा मनाउन राधेराधेको मन्दिर पारि भारतमा जाने कार्यक्रम थियो । घरमा ताल्चा मारे गइसक्नुभएको हुनाले छोरी फर्केकी थिई,’ दुर्गादेवीले सुनाइन्, ‘हिजै फर्केर आएको हुनाले आजै ऊ जानुपर्ने कारणै थिएन । यसरी पहिले कहिल्यै गएकी पनि थिइनँ । त्यसैले मलाई रोशनीको कुरा पुरै बनावटी लाग्यो ।’
दुर्गादेवीको छिमेकी पर्ने एक जना भूपू सैनिक मोतीराम नेपाल पनि उजुरी गर्न भनेर साथै गएका थिए । ‘तिम्री साथी यसरी हराउँदा तिमीलाई केही पीर छैन नानु ?’ भनेर मोतीरामले रोशनीलाई सोध्दा बबिताले ‘तँ को होस् यसरी केरकार गर्ने’ भनेर झम्टिन आइन् । त्यो देखेपछि गाउँलेको शंका उनीहरूमाथि बढेको थियो । तर त्यही घरमा रहेका प्रहरीले गाउँलेलाई बम दिदीबहिनीमाथि थप कुनै प्रश्न सोध्न दिएनन् ।
मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै बिहान साढे आठ बजेतिर गाउँलेका साथ दुर्गा फर्किंदा बाटामा पर्ने खोलामा साइकल भेटिएको खबर आयो । निर्मला त्यही साइकलमा रोशनीको घर गएकी थिइन् । खोलाछेउ बाख्रा चराउन गएकी दुर्गादेवीकी छिमेकी धन भण्डारीले साउन १० गते नै अपराह्न ४ बजेतिर साइकल देखेकी रहिछन् । उनका अनुसार स्टयान्ड लगाएको अवस्थामा खोलामा साइकल अडकिएको थियो । कसैले फालेको कवाडी होला भनेर धनले त्यसलाई वास्ता गरिनछन् । तर, बिहान वडा प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज जगदीश भट्टको भतिजो लोकेन्द्र भट्टको घरमा काम गर्ने चौधरी थरका एक अधबैंसेले साइकल देखेपछि यसबारे हल्लीखल्ली भएको थियो ।
साइकल भेटिएको खबर सुन्नेबित्तिकै बबिता बमले रुपा कार्कीलगायत गाउँलेका अघिल्तिर ‘उसो भए लास पनि त्यतै होला’ भनेपछि सुन्नेहरू स्तब्ध भए । ‘त्यतिबेलासम्म हामी सबैलाई छोरीलाई इन्डियातिर बेच्न लगेको छ कि भन्ने शंका थियो,’ निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्त भन्छन्, ‘निर्मलाको ज्यान गएको छ भन्ने पहिलो मानिस बबिता नै हो ।’
नभन्दै खोलाभन्दा अलिक पर उखुबारीमा निर्मलाको शव उत्तानो अवस्थामा फेला पर्‍यो । शव फेला पर्दा बिहानको साढे नौ बजेको थियो । ‘खोला छेउमा किताब, अम्बा र कलम पनि थियो,’ भक्कानिँदै दुर्गादेवीले सुनाइन्, ‘राति ठूलो पानी परेकाले खोला बढेकाले उखुबारीमा पानी पसेको थियो । किताब भने ओभानै थियो ।’
शव फेला पर्नेबित्तिकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का नेतृत्वको प्रहरी टोलीले घेर्‍यो । टोलीमा एक महिला प्रहरी पनि हातमा सेतो पञ्जा लगाएर सादा पोसाकमा थिइन् । ‘एकेन्द्रले हातले केही इसार गरेपछि ती महिलाले छोरीको सुरुवाल निकालेर पानीमा धोइन् र रगतले लतपत भएको योनी पखालिन्,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘घटनास्थलको मुचुल्का गरी सिलबन्दी गर्न‘पर्नेमा उल्टै प्रमाण नष्ट गरेको भनेर गाउँले कराउन थालेपछि एकेन्द्र रिसले आगो भए ।’
उपस्थितमध्ये धेरैले यसरी प्रहरीले योनी पखालेको र सुरुवाल धोएर प्रमाण नष्ट पारेको भिडियो मोबाइलले खिचेर सार्वजनिकसमेत गरिदिएका थिए, जुन युटयुबमा हेर्न सकिन्छ । भिडियोमा कुर्ता सुरुवाल लगाएकी एक युवतीले शव नजिकै जमिरहेको पानीमा निर्मलाको रातो सुरुवाल धोएको देखिन्छ । अर्काे भिडियोमा निर्मलाको योनी धमिलो पानीले पखालेको पनि प्रस्टै देखिन्छ ।
‘प्रमाण नष्ट नगर्न गाउँलेहरूले सचेत गराउँदा यो शव तिमीहरू नै जिम्मा लिओ त्यसो हो भने । होइन भने नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सिकाउन नआओ भनेर इन्सपेक्टर एकेन्द्रले सबलाई झपारे,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘प्रहरीले चारैतिरबाट घेरेर हामीलाई अघि बढ्न पनि दिएनन् । छोरीको लास म निसहाय भएर हेरी मात्रै रहेँ ।’
राजधानीमा आएका प्रत्यक्षदर्शी अधिकारकर्मीहरूका अनुसार प्रमाण नष्ट पारिसकेपछि ती महिला घटनास्थलबाट गाडी चढेर गइन् । केही बेरमै उनी फेरि बर्दीसहित सेतो पञ्जा लगाएर लास भएकै ठाउँमा फर्किन् ।
जायज माग राख्दा उल्टै प्रहरीले अमर्यादित र अशिष्ट शैलीमा हकारेपछि गाउँलेहरू क्रुद्ध भए । तर, प्रहरीले एक डेढ घण्टामै सबै मुचुल्का तयार पारेर शव उठाउन खोज्यो । गाउँलेहरूले कम्तीमा मेयर आउन्जेल कुरिदिन आग्रह गर्दा इन्सपेक्टर एकेन्द्रले ‘मेयर पनि मै हुँ, एसपी पनि मै हुँ, सीडीओ पनि मै हुँ’ भनेर कडकेको यज्ञराजले बताए ।
सीडीयो, एसपी वा मेयरमध्ये कुनै एक नआइकन कुनै हालतमा शव उठाउन नदिने अडान लिएपछि एकेन्द्रसहित सबै प्रहरी शव त्यहीँ छाडेर गए । प्रहरी हिँडे पछि के गर्ने भनेर बिलखबन्दमा परेका निर्मलाका बाआमा र गाउँले सबै प्रहरीकै खोजीमा लागे ।
‘उनीहरू त वडा प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज जगदीश भट्टको घरमा गएर खाजा खाइरहेका रहेछन्,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘जगदीश हाम्रा छिमेकी पनि भएकाले उनीमाथि ठूलो भरोसा थियो, उनकै खेतमाथि शव भेटिएको थियो । अनुसन्धानमा सघाउलान् कि भनेको त उनी हामीलाई भेट्नसम्म पनि आएनन्, उल्टै मुचुल्का गर्न आएका प्रहरीलाई घरमा राखेर खुवाइरहे ।’
केहीपछि उनीहरू आए र शव महाकाली अञ्चल अस्पतालमा लगेर राखे । प्रमाण मेटाएको विरोधमा स्थानीय उत्रिएपछि त्यसै साँझ प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरी महिला र युवामाथि आक्रमण गर्न सुरु गर्‍यो । विरोधका बीच भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा डाक्टरले निर्मलाको मृत्यु साउन १० गते अपराहन साढे २ देखि ३ बजेको समयमा भएको लेखेका छन् ।
पोस्टमार्टम सकेपछि साउन १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ठूलो छलफल चल्यो र प्रहरीले यज्ञराजलाई शव जलाउन दबाब दिए । अपराधी पत्ता नलागेसम्म शव उठाउँदिनँ भनेर उनी घर फर्के । उनी अटोबाट ओर्लन नपाउँदै ‘भिनाजुलाई सीडीओसापले बोलाउनुभएको छ’ भन्दै गाडी लिएर एक व्यक्ति आइपुगे । उनी थिए– यज्ञराजका माइला ससुराका छोरा डोटीमा बस्ने तीर्थ भण्डारी ।
‘आफू त सिधा मान्छे, होला भनेर म उनीसँगै गएँ । त्यहाँ सीडीओ कुमारबहादुर खड्का, एसपी डिल्लीराज विष्ट र अरू धेरै हाकिमहरू मिटिङ गरेर बसिरहेका रहेछन्,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘मलाई देख्नेबित्तिकै सीडीओले तपाईंलाई छोरीको शव जलाउन किन मन लागिरहेको छैन भनेर हकारे । एसपीले चाहिँ छोरीको जीउमा किरा उमारेर केही फाइदा छैन भन्दै तुरुन्त जलाउन दबाब दिए ।’ विष्टले आफू स्थानीय भएको नाताले हालसम्म बल प्रयोग नगरेको भन्दै शव जलाउन आनाकानी गरे जे पनि हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए । तर पनि यज्ञराज कुनै कागजमा सही नगरी बाहिर निस्के ।
यता मामा भनेर अघि सरेका तीर्थराज आफैं शव बुझेर जलाउन तम्सिए । यज्ञराजका अनुसार मेयर सुरेन्द्र विष्टसँग केहीबेर कुनामा गफ गरेपछि उनी शव बुझ्न अघि सरेका थिए । ‘मेरा भिनाजु मानसिक रोगी छन्, यिनका कुरा के सुन्नु भनेर उनी शव बुझ्न अघि सरेको देख्दा म त छक्क परें,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘बिहा भएदेखि उनी कहिल्यै हामीलाई भेट्न आएका थिएनन् । निर्मला बित्दा पनि उनी ओपेरा होटलमा आफ्ना साथी पदमराज भट्टसँग आएर बसे । हामीलाई सहानुभूति दिन घरमा एकपटक पनि आएका थिएनन् । अचानक भान्जीको शव बुझ्छु भनेर तम्सिएपछि मैले मानिन र बाहिर निक्लें ।’
उनका अनुसार पदमराज भट्ट मेयर सुरेन्द्र विष्टका साथी हुन् । पदमराजका साथी तीर्थराज मेयरकै आग्रहमा पदमले बोलाएर शव बुझ्न आएका थिए । भोलिपल्ट शव नजलाए सबैलाई जेल हालिदिने धम्की एसपी विष्टले दिन थालेको र एक जना इन्स्पेक्टरले आफूलाई हातपातसमेत गर्न खोजेको यज्ञराज बताउँछन् । शव नसडोस् भनेर बरफ राख्न अस्पताल पुग्दा तीर्थराज शव बुझ्ने तरखरमा रहेछन् । नगरपालिकाको फोहोर फाल्ने थोत्रो ट्याक्टर शव लिन भनेर अस्पतालमा आइपुगिसकेको थियो ।
‘मैले लास उठाउने कुरामा मेरो सहमति छैन भन्दाभन्दै तीर्थराजले आफ्नो भान्जी मैं जलाउँछु भनेर मलाई तथानाम गाली गर्‍यो । प्रहरी भने पूरै उसैलाई साथ दिएर मामा नै तयार भएपछि तिमीहरूले आलटाल गरेर हुन्छ भन्दै हातपात गर्न तम्सिए,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘उनीहरूले कागज पनि तयार पारेका रहेछन् । त्यसमा बिहान १२ बजेसम्म लास नउठे कफ्र्यु लगाउने र गोलीसम्म पनि चलाउन सकिने कुरो थियो ।’
यज्ञराज त्यसमा सही नगरी निक्ले । बाहिर आएर तीर्थराजले एकतर्फी रूपमा शव बुझ्न लागेको जानकारी उनले आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयलाई सुनाए । त्यो सुन्नेबित्तिकै ‘कंश मामा मुर्दाबाद’ भन्ने नारा लाग्यो । प्रहरीले तीर्थराजलाई सुरक्षाको घेरामा अस्पताल बाहिर निकालेर मोटरमा राखी लग्यो ।
यज्ञराज नमानेपछि तीर्थराजले दिदी दुर्गादेवीलाई ललाइफकाइ गरे । ‘यति नगरे पन्त परिवार सबलाई जाकिदिन्छ भनेर भन्यो,’ दुर्गादेवी भन्छिन्, ‘त्यसपछि म बाध्य भएर लास उठाउन सहमत भएँ ।’
पत्नी नै राजी भएपछि के विरोध गरिरहनु भनेर यज्ञराज चुप लागे । ‘यसैलाई सहमति मानेर उनीहरूले शव महाकालीको तीरमा लगेर जलाए । चार–पाँच सय पुलिस मलामी गएका थिए । मलाई उनीहरूले आफ्नो गाडीमा लगेका थिए,’ यज्ञराज भक्कानिए, ‘छोरीको शरीर एकाएक खरानी बनिरहेको टुल्टुल्ती हेर्नुबाहेक उपाय थिएन ।’
शव जलाइसकेपछि अपराधी पत्ता लगाइपाउँm भनी स्थानीयले स्वस्फूर्त प्रदर्शन जारी राखे । प्रहरीले भने उनीहरूमाथि लाठीमुंग्री बर्साउन थाल्यो । तीर्थराज भने लगत्तै डोटी फर्किए । उनको मोबाइल त्यसपछि अफका अफ रह्यो ।
आन्दोलन चर्किएर केही घाइतेसमेत भएपछि सरकारले डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गर्‍यो । डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्कालाई मुख्यालय झिकायो । सुरुदेखिकै अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएर एसपी कुवेर कठायत कञ्चनपुर पुगेको एक घण्टामै न्यायको माग राखी प्रहरी कार्यालय अघिल्तिर जम्मा भएका कञ्चनपुरवासीमाथि गोली चल्यो ।
‘त्यसबेला हामीलाई त पृथ्वी नै पल्टिएसरि भयो,’ अधिकारकर्मी चन्द भन्छिन्, ‘चारैतिरबाट गोलाबारी हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन । किन चल्यो पनि थाहा छैन । तर हाम्रा साथी भटाभट ढले । भुइँमा रगतको पोखरी नै जम्यो ।’
गोली लागी कञ्चनपुरका किशोर सनी खुनाको ज्यान गयो । २० गम्भीर घाइते भए । त्यसमध्ये एकको खुट्टा काटिएको छ भने केही अझै इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत भएको चन्दले बताइन् ।
‘हामीले मात्र न्याय मागेका थियौं, यत्रो रणसंग्राम भएको देख्दा यो देश कसले चलाइरहेछ भन्ने प्रश्नले निदाउन दिएको छैन,’ अधिकारकर्मी तथा दुर्गादेवीकी छिमेकी माया नेगी भन्छिन्, ‘यो यत्रो हुँदा पनि सरकार अपराधीकै संरक्षणमा लागी बसेको देख्दा अचम्म लागेर आउँछ ।’
‘निर्मला हराएको दिन साउन १० गते एसपी डिल्लाराज विष्टका छोराको जन्म दिन परेको रहेछ,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘महेन्द्रनगरभरिको राम्रो होटल ओपेरामा ऊसहित तीन जना केटा र तीन जना केटीहरू त्यहाँ पुगेका रहेछन् । तीनै जना केटीहरू गोरी भएको र त्यसमध्ये एउटीचाहिँ सानी भएको होटलका मानिसले मलाई बताएका छन् । कताकता मलाई त्यो सानी केटी मेरै छोरी थिई र ती दुई केटीचाहिँ रोशनी र बबिता नै थिए भन्ने लाग्छ ।’
ती तीनमध्ये अर्काे केटा मेयर सुरेन्द्र विष्टको भतिजो भएको खुलेको छ । मेयर र एसपी विष्टले हूलहुज्जतै गरेर प्रमाण नष्ट पार्न लागेको अनि तीर्थराजलाई झिकाएर शव जलाउन लगाएको देख्दा आफूहरूलाई उनीहरूमाथि छानबिन हुनैपर्ने लागेको यज्ञराज बताउँछन् ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले तीर्थराजमाथि शंका लागेर उसलाई झिकाउन खोज्दा झिकाउनै सकिएन । उसको मोबाइल अफको अफ नै थियो । बल्लबल्ल ससुरालीमा दसतिरबाट फोन गरेर खबर पठाएपछि मोबाइल अन गर्‍यो,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘के भनेर लास जलाएको थिइस् ? यसको जवाफ दे त मलाई भनेर वीरेन्द्रले कडकेर सोध्दा तीर्थराज नाजवाफ भयो ।’
छानबिन सकेर फर्किने बेलामा उनलाई वीरेन्द्र केसीले अपराधीहरू पत्ता लाग्नबाट केही दिन मात्रै टाढा भएको र सबै प्रमाण जुटेको बताउँदै ढुक्क हुन भनेका थिए । ‘केही गरी प्रमाणहरूलाई बंग्याउने काम हुन गयो भने म काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्छु पनि भन्नुभएको थियो,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘नभन्दै अस्ति गर्नु पनि भएछ । मलाई एकदम दु:ख लागेको छ, न्यायका लागि यति धाउन परेकामा ।’
छानबिनका क्रममा खोलाबाट साइकल झिक्ने इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टको भतिजाको घरमा काम गर्ने चौधरीलाई वीरेन्द्रले भेट्न खोज्दा निकै दिन झुलाइएको यज्ञराज सम्झन्छन् । ‘उहाँले चौधरीमाथि शंका लागेर सोधपुछ गर्न खोज्दा कहिले घाँस काट्न गएको छ भनेर झुलाए, कहिले बिरामी छ भनेर फर्काए,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘चर्काे रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएपछि बल्ल चौधरीलाई भेट गराए । उनी त घरमै रहेछन्, बिरामी पनि थिएनन् ।’
वीरेन्द्रले साइकल खोलामा राखेर लौ कसरी झिक्यौ देखाऊ भन्दा चौधरीले ह्यान्डलमा नसमाती पछाडि क्यारिङमा समातेर निकालेका थिए । किन खोलामा गएका थियौ भनेर सोध्दा दिसा लागेर गएको थिएँ भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘जबकि उनी बसेको घरमा टाइलेट थियो,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘त्यसमाथि दिसै गर्न जान परे पनि नजिकै जंगलमा नगई बाटाको छेउमा पर्ने खोलामा जानुपर्ने कारण पनि देखिँदैन ।’
फेरि साइकल अघिल्लो दिन चारै बजे देखें भन्ने महिला धन भण्डारी र ती चौधरीको कुरा पनि बाझिन्छ । धनका अनुसार साइकलको स्ट्यान्ड लगाइएको थियो । तर चौधरीले साइकल खोलामा लडिरहेको अवस्थामा थियो भनेका छन् । साइकलको दुई छेउमा भएको पकेटमा निर्मलाको एउटा चप्पल थियो । साइकल लडेको भए चप्पल नहुनुपर्ने यज्ञराजलाई लाग्छ ।
यसरी प्रहरीले जम्मा पारेको र भेटेको भनिएका प्रमाणहरू आपसमा बाझिएको, स्वत: प्रमाणमा लाग्ने सबुतहरू प्रहरीले नै मेटेको अनि बारम्बार बल प्रयोग भएको देख्दा कञ्चनपुरवासीलाई जिल्लामै बसेर न्याय पाइन्छ भन्ने आस मरेको रहेछ ।
‘त्यसैले हामी काठमाडौं आयौं,’ शारदा भन्छिन्, ‘न्याय नमिलेसम्म अब फर्किने छैनौं ।’
काठमाडौंमा आइपुग्न नपाउँदै आफूलाई सादा पोसाकका प्रहरीले कुन होटलमा बसेको भनी सोधपुछ गरेको उनले बताइन् । ‘अपराधीको पछि लाग्नुपर्ने पुलिस न्याय खोज्ने हाम्रोपछि लागेको छ,’ शारदाको प्रश्न छ, ‘आखिर किन यस्तो भइरहेको छ, सरकारले जवाफ देओस् ।’
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूबाटै प्रमाण नष्ट पारेकाले सबभन्दा पहिले तिनीहरूमाथि कारबाही सुरु हुनुपर्ने र नागरिक समाजका मानिससमेत समावेश गरेर छानबिन समिति फेरि गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘निर्मलाको गुप्तांग पखाल्ने ती महिला प्रहरी को हुन्, कसको निर्देशनमा त्यसो गरियो ? इन्स्पेक्टर एकेन्द्रले किन यो सब गर्न लगाए ?’ शारदाले भनिन्, ‘लासको मुचुल्कामा प्रहरीहरू आफैंले सही गरेर सनाखत गरेका छन्, यो कानुनअनुसार गर्न पाइने हो कि होइन ? बाबुआमाको सहमति नहुँदानहुँदै मामा हुँ भन्दै आउने तीर्थराज भण्डारीमाथि छानबिन किन नभएको ?’ निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टले नक्कली अपराधी खडा गरेर सक्कली उम्काउन खोजेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन् ।
‘सुरुमा उनले दुई जना केटाहरू समाते र यातना दिए,’ यज्ञराज भन्छन्, ‘पछि अर्का एक युवालाई समातेर बेसमारी कुटे । कसैले पनि कबुल नगरेपछि उनले दिलीप विष्टलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन खोजे । मलाई कार्यालयमै झिकाएर जाहेरी दे कि दे भनेर ठूलो जोरजुलुम गरे । आज ऊ डीएनए परीक्षणबाट निर्दाेष साबित भएको छ । जाहेरी दिएको भए मलाई कत्रो पाप लाग्ने रहेछ †’
शंकास्पद भूमिकामा एसपी
काठमाडौं (कास)– निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना छानबिनमा ढिलाइ गरेको आरोपमा निलम्बित कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टले २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका हुन् । त्यसयता ३१ पटक सरुवा भएका उनको १९ वटा पोस्टिङ सुदूरपश्चिममा मात्रै भएको छ ।
दार्चुला शैलशिखर नगरपालिका (साविक गोकुलेश्वर गाविस) ९ मा जन्मेका विष्ट तीन दाजुभाइमध्ये माहिला हुन् । हाल कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको पहिलो पोस्टिङ अछाममा भएको थियो । त्यसपछि डडेलधुरा, टीकापुर, जोगबुढा, दोधारा चाँदनी, डोटीको बुडर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुरको बेलौरीमा खटिए । बीचमा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गुल्म नेपालगन्ज र रुकुममै प्रहरी निरीक्षकमा सरुवा भए । २०६३ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा हुनेबित्तिकै बैतडी जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसपछि उनी दार्चुला जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा सरुवा भए ।
करिब डेढ वर्षभन्दा बढी उनी बझाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर काम गरे । एक वर्ष हैटीमा फर्म पुलिस युनिटमा गएका उनी त्यहाँबाट फर्कनेबित्तिकै सुदूपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायल सरुवा भए । त्यसपछि सुदूपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलमै पोस्टिङ भए । डीएसपीमा कार्यरत हुँदा अधिकांश समय सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाको इञ्चार्ज भएका विष्ट अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकाली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा सरुवा भए ।
क्षेत्रीय दंगा नियन्त्रण कार्यालय महेन्द्रनगरमा उनी दुई पटक पोस्टिङ भएका थिए । त्यसपछि केही समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु सरुवा भएका उनी २०७२ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मा बढुवा हुनेबित्तिकै डोटी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख भएका थिए । त्यसपछि केही समय मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेत सरुवा भए र करिब ६ महिनामै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा काज सरुवा भए ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०७:०५
किशोरी बलात्कार र हत्या प्रकरण- प्रमाण लुकाउनेमाथि नै अनुसन्धान हुनुपर्छ : कानुनविद्
लापरबाही गर्ने जोसुकै होस्, कारबाही हुन्छ : डीआईजी
भाद्र २७, २०७५ चित्रांग थापा, भवानी भट्ट
महेन्द्रनगर — निर्मला पन्त हत्यापछि प्रमाण नष्ट गर्न संलग्न हुनेहरूमाथि नै अबको अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तका अामा बुवा काठमाडौंमा । तस्बिर : घनश्याम खड्का
‘अनुसन्धानमा समस्या नै छैन, घामजत्तिकै छर्लंग छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वरप्रसाद भट्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘जसले अनुसन्धान गरिराखेको थियो, जसमाथि औंला सोझिएको छ, उनीहरूले जवाफ दिनुपर्‍यो। प्रमाण तिनीहरू आफैं हुन्।’ उनले घटनाको प्रमाण नष्ट गरेर निर्दाेषलाई फसाउन खोज्ने कारण के हो र कसलाई जोगाउन प्रमाण ढाकछोप गर्न खोजियो भन्ने जवाफ उनीहरूले दिनुपर्ने बताए।
‘अनुसन्धानमा संलग्न भएकाहरूले नै प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने र दोषीका रूपमा डमी खडा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?’ उनले भने, ‘नयाँ फौजदारी मुलुकी संहितामा समेत प्रमाण नष्ट गर्नेलाई कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएकाले लापरबाही गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्नेहरू उम्किन पाउनुहुन्न।’
प्रहरीको जिम्मेवारी नै घटना अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षा भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए। थ्रेट आएको भन्दै राजीनामा दिने उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्यलाई थ्रेट दिने व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रत्यक्ष प्रमाण र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शक्तिशाली अपराधी भनिएको छ, अहिले राज्यभन्दा शक्तिशाली को छ?’ उनले घटनास्थलमा प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भएकाले यस्तो काम कसका लागि भएको हो, छानबिन हुनुपर्ने बताए।
स्थानीयले पनि विष्ट र बम दिदीबहिनीलाई छाडेपछि अनुसन्धान नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। ‘प्रहरीले अहिलेसम्म दिलीपलाई नै अपराधी हो भनिरहेको थियो,’ नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्, ‘अब वास्तविक अपराधी सार्वजनिक गरिनुपर्छ।’ उनी न्याय माग्दै निर्मलाका बुवा यज्ञराज, आमा दुर्गादेवी र महिला अधिकारकर्मीसँगै काठमाडौं पुगेकी छन्।
प्रदेश ७ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी सुरज केसीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही हुने बताए।
‘घटनालगत्तै अनुसन्धानमा संलग्न भएकाहरूमध्ये जो, जसबाट गल्ती भएको छ, उनीहरूलाई हदैसम्म कारबाही हुनेछ,’ केसीले भने, ‘सरुवा भएर अन्यत्र गएका अधिकृतहरूलाई झिकाएर नयाँ चरणको अनुसन्धान सुरु हुन लागेको छ।’ अनुसन्धानमा समय लागे पनि दोषीलाई उम्कन नदिने दाबी उनले गरे। ‘प्रहरीले घटनाका दोषीलाई पत्ता लगाएरै छाड्छ,’ उनले भने, ‘शंकास्पद रूपमा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको पनि डीएनए परीक्षण गरिनेछ।’
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले भने अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको दाबी गरेका छन्। ‘अब फराकिलो ठाउँबाट अनुसन्धान साँघुरिँदै गएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी एवं घटनाका अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकिएका कृष्णराज ओझाले भने, ‘एकातिर डीएनए डेभलप भएको छ, अर्कातिर हामीले पनि एउटा बाटो पहिल्याएका छौं, अब छिट्टै अपराधी पत्ता लाग्छ।’
दिलीपको डीएनए निर्मलाको शरीरबाट लिइएको नमुनासँग नमिलेपछि उनलाई मंगलबार छाडिएको थियो। ‘अब धेरै गाह्रो छ्रैन, शंकास्पदको डीएनए परीक्षण गर्नेबित्तिकै मेल भए ठोस प्रमाणसहित अपराधी सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले केही शंकास्पदको डीएनए परीक्षणका लागि पठाउने तयारी पनि गरिरहेका छौं।’
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ २२:२९
चावहिल-चुच्चेपाटी सडक निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दै स्थानीयको विरोध, यातायात अवरुद्ध
रुद्राक्षको दानालाई राम्रो आकार दिन लगाइएको प्लाष्टिक क्लिप प्रहरीले हटायो
विपद् व्यवस्थापन : योजना बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्
तुलाराम पाण्डे, हरि गौतम